Ndeapi akanakisa mafonti eemail? Ndeapi Emega Akachengeteka Mafonti? | Martech Zone
Imi mese makanzwa zvichemo zvangu nekushaikwa kwekufambira mberi mukutsigirwa neemail pamusoro pemakore saka ini handizoshandisa (yakawandisa) nguva ndichigunun'una nezvazvo. Ini ndinongoshuvira kuti imwechete hombe email mutengi (app kana bhurawuza), ibude muhomwe uye edza kutsigira zvizere shanduro dzazvino dzeHTML neCSS. Ini handina mubvunzo kuti makumi emamirioni emadhora ari kushandiswa nemakambani kugadzirisa zvakanaka maemail avo.
Ndosaka zvakanakisa kuve nemakambani senge Email mamonki anogara pamusoro peese maficha eemail dhizaini. Mune ino yazvino infographic, Typography muemails, timu inofamba newe kuburikidza typography uye kuti akasiyana mafonti uye maitiro avo anogona kutumirwa kugadzirisa ako maemail. 60% yevatengi veemail ikozvino vanotsigira mafonti etsika anoshandiswa mumaemail magadzirirwo ako anosanganisira AOL Mail, Native Android Mail App (kwete Gmail), Apple Mail, iOS Mail, Outlook 200, Outlook.com, uye email-yakavakirwa paemail.
Kune mana Mitauro Yemhuri Inoshandiswa muemail
Serif - Serif mafonti ane mavara ane kukura, mapoinzi, uye maumbirwo kumagumo ekurova kwavo. Vane chitarisiko chepamutemo, mavara akapatsanurwa uye nzvimbo yemitsetse, ichivandudza zvikuru kuverenga. Mafonti anonyanya kufarirwa muchikamu ichi ndiTimes, Georgia uye MS Serif.
Sans Serif - Sans serif mafonti akafanana nemhando inopandukira iyo inoshuva kuumba yavo yega uye saka haina chero inoshamisira 'embellishments' yakasungirirwa. Ivo vane semi-yakasarudzika kutaridzika iyo inosimudzira kuita pamusoro pekutaridzika. Mafonti anonyanya kufarirwa muchikamu ichi ndiArial, Tahoma, Trebuchet MS, Open Sans, Roboto uye Verdana.
Monogram - Akafuridzirwa kubva pafayiprita font, aya mafonti ane block kana 'slab' kumagumo evanyori. Kunyangwe isingawanzo shandiswa mu HTML email, mazhinji e 'fallback' akajeka mavara maemail muMultiMIME maemail anoshandisa aya mafonti. Kuverenga email uchishandisa aya mafonti kunopa iko kwekutungamira kunzwa kwakabatana nezvinyorwa zvehurumende. Courier ndiyo inonyanya kushandiswa font muchikamu ichi.
Calligraphy - Kutevedzera mavara akanyorwa nemaoko ekare, chii chinoisa mafonti aya parutivi kufamba kunoitwa nehunhu hwese. Aya mafonti anonakidza kwazvo kuverenga mune inooneka svikiro, asi kuaverenga pane yedhijitari sikirini kunogona kunge kuchinetsa uye kumeso-kumeso. Saka mafonti akadaro anonyanya kushandiswa mumisoro kana marogo muchimiro chemufananidzo wakamira.
Email-yakachengeteka mafonti anosanganisira Arial, Georgia, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times, Trebuchet, uye Verdana. Tsika mafonti anosanganisira akati wandei mhuri, uye kune vatengi vasingatsigire iwo, zvinofanirwa kuteedzera mune anodonhedza mafonti. Nenzira iyi, kana mutengi asingakwanise kutsigira yakasarudzika font, inodzokera kune font iyo yainogona kutsigira. Kuti utarise zvakadzama, ita shuwa kuti uverenge chinyorwa chaOmnisend, Email Yakachengeteka Mafonti vs. Tsika Mafonti: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Nezvavo.
Ive neshuwa yekudzvanya-kuburikidza kana iwe uchida kushamwaridzana neiyo infographic.
Tags: AOL Mailtsamba yeapuroArialcalligraphyeemail mafontiemail mamongiemail yakachengeteka mafontikudonha-kumashure mafontikudonha mafontimafonti muemailGeorgiaHelveticaiOS mailLucidamonogramNative Android Mail App (kwete Gmail)Outlook 200Outlook.comSafari-yakavakirwa emailisina serifserifInonzwikaTahomanguvaTrebuchettypographyVerdana
All-American uye CEO Jeremy Bloom Inokurukura Sanganisa
Jul 28, 2017 pa 10: 04 AM
Mhoro Douglas, inonakidza uye inonakidza chinyorwa kuverenga. Ndingazove nemubvunzo nezve iyi "60% yevatengi veemail izvozvi vanotsigira mafonti etsika anoshandiswa mumaemail dhizaini" Iko kune chero chirongwa chiri kuenderera kana tekinoroji nyowani yekuunza izvo padyo ne100%?
Jul 28, 2017 pa 10: 06 AM
Wow, ndinoshuva! Ini ndinofunga mubatanidzwa wevashandisi havatombo gadziridza pamwe nehurombo zviyero muemail. Zvinosuruvarisa isu tese!